नृत्यले आत्मसम्मान र आत्मविश्वास बढाउँछ : सुवास बुढाथोकी « Lokpath
काठमाडौं । ३८ वर्षसम्मको नृत्य अनुभव बोकेका भक्तपुर चाँगुनारायणमा जन्मिएका सुवास बुढाथोकी फेरि नृत्य निर्देशनमा फर्किएका छन् । केही समय अगाडि यस क्षेत्रबाट सन्यास नै लिए पनि कामको नृत्यको मोहले फेरि निर्देशनमा फर्किएको बताए ।
भारतमा प्रवेश बान्तवासँग नृत्य सिकेर नेपाल फर्किएर आएपछि उनको संघर्ष र उपलब्धीबारे कुराकानी गरिएको छ । सोही अन्तर्वार्ता :
मलाई सानैदेखि नाच्न रहर थियो । स्कुलमा सानोतिनो कार्यक्रम हुँदा पनि नाच्न रमाएर गइहाल्थेँ । यस्तै क्रम चल्दै गर्दा एक दिन २०४३-४४ सालतिर भक्तपुरमा नवदुर्गा कला मन्दिर खोलेको थियो । मैले त्यहीँबाट नृत्य सिक्न सुरु गरेँ । यसरी नृत्यबारे जानकारी लिइरहँदा प्रवेश वान्तवासँग भटे र उहाँको साथसँगै म नृत्यमा अघि बढेँ ।
अहिले के-केमा काम गर्दै हुनुहुन्छ ?
मैले डेढ दर्जनभन्दा धेरै चलचित्रमा नृत्य निर्देशन गरिसकेँ । मैले नेपालीमा मात्र होइन अन्य भाषाको गीतमा पनि नृत्य निर्देशन गरिसकेको छु । तर, मलाई अहिले चलचित्रमा भन्दा पनि नयाँ मान्छेहरूलाई सिकाउन मनपर्छ । मैले सिकाएका भाइबहिनीहरू सफल भएका छन् । त्यसैले मलाई आनन्द लाग्छ ।
नृत्यका भावी पुस्तालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
नृत्यले स्वास्थ्यमा पुर्‍याउने फाइदा के के हो ?
नाच तौल घटाउने सबैभन्दा प्रभावकारी तरिका हो । जुन क्यालोरी घटाउन, मांसपेसीहरू मजबुत पार्न, शरीरलाई टोन गर्न सहयोग गर्दछ । नृत्यहरूले भावनाहरूको सकारात्मक शुल्क दिन्छ, मुड उच्च पार्छ, आत्मसम्मान र आत्मविश्वास बढाउँदछ । नृत्य गर्दै, तपाईं अनुशासन प्रशिक्षण र प्रेरणा कायम राख्न सक्षम हुनुहुनेछ । यो केवल नियमित गतिविधिहरू मात्र होइन, रमाइलो पनि हो ।
प्रकाशित मिति: २०७८,माघ,६,बिहीवार १४:०९
काठमाडौं । बलिउड अभिनेता सलमान खान नेपाल आउने कार्यक्रम स्थगित भएको छ । आयोजकले सलमान खान लगायत टिमको माग पुरा
स्वस्तिमा खड्का अभिनित फिल्म ‘चिसो मान्छे’को ट्रेलर सार्वजनिक (भिडियोसहित)
काठमाडौं । स्वस्तिमा खड्का अभिनित फिल्म ‘चिसो मान्छे’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । आउँदो महिना असार ३ गतेबाट प्रदर्शनमा आउने
प्रमोद र अमृतको ‘आऊ अलि वर आऊ’ सार्वजनिक (भिडियो)
काठमाडाैं । गायक अमृत एडीले ‘आऊ अलि वर आऊ’ बोलको गीत सार्वजनिक गरेका छन् । प्रमोद पन्तको सङ्गीत र देवदत्त